Vietnam miomana amin'ny fiverenan'ny mpizahatany vahiny
Home » Vaovao momba ny fizahantany » Vietnam miomana amin'ny fiverenan'ny mpizahatany vahiny
Ireo mpizahatany tonga any Vietnam dia mila hatokana karama fito andro
Ny dingana voalohany amin'ny drafitra fanokafana dia haharitra hatramin'ny aprily ka hatramin'ny Jolay
Haverina amin'ny volana jolay ny fifamoivoizana an'habakabaka miaraka amin'i Taiwan, Korea Atsimo ary Japon
Amin'ny volana septambra, hisokatra ny fetra ho an'ny mpitsidika avy amin'ny firenena manana toe-javatra COVID-19 tsara
Ny manampahefana sivily misahana ny fiaramanidina sivily ao Vietnam dia nanolotra tondrozotra dingana telo ho an'ny famerenana amin'ny laoniny ny sidina iraisam-pirenena.
Ny dingana voalohany dia haharitra hatramin'ny aprily ka hatramin'ny Jolay. Ho an'ny mponina Vietnamianina tsy afaka miverina ihany izy io i Vietnam noho ny fetra mihidy. Fa izy ireo ihany no handoa ny fanadinana PCR sy ny toeram-ponenana ao amin'ny trano fandinihana.
Hanomboka amin'ny Jolay ny dingana faharoa. Amin'izao fotoana izao, haverina amin'ny laoniny ny fifamoivoizana amin'ny rivotra miaraka amin'i Taiwan, Korea atsimo ary Japon.
Ny dingana fahatelo dia manomboka amin'ny volana septambra. Mandritra io vanim-potoana io, kasaina hanokatra sisin-tany ho an'ny firenena izay misy ny toe-javatra epidemiolojika tsara ho an'ny COVID-19, ary ny fanaovana vaksiny ny olom-pirenena.
Ankoatr'izay, vaksinim-pankatoavana eken'ny manam-pahaizana avy amin'ny World Health Organization ihany no tokony hampiasaina.
Ireo mpizaha tany tonga any Vietnam koa dia mila karanty mandritra ny fito andro.
Air Astana dia mandefa serivisy Meet & Greet
Thailand Mahagaga dia tsy maintsy mamaly ny tsiky amin'ireo mpiasan'ny fizahantany